Aynu ka wada hadalno Jacas, fanaaniin iyo fardo. Caddaynta eraybixinta. | Fardaha Noti
Aynu ka hadalno Jacas, faan iyo fardo
Jenny monge | | Fardo, Fardaha fardaha
Adduunyada sinnaanta, qof walba wuu ogyahay taas farduhu waa xayawaanka waaweyn halka fanaaniintuna ay yihiin kuwa yaryar, hadda waad isweydiin doontaa ... Iyo Jacas?
Maaha markii ugu horreysay ee ereybixintu naga dhigto mid ka turjumaya waxa aan la macaamilayno. Waxaan horeyba u helnay nafteenna maqaal kale, tusaale ahaan kiiska fardaha piebald ama pinto, in dhowr erey ayaa tixraaci kara isla xayawaanka. Ereyga "jackfruit" wax la mid ah ayaa mar labaad dhacaya. Aynu ogaanno!
Spain muddada Jaca waxaa loola jeedaa nooc faras dhererkiisu yar yahay badanaa, in kasta oo ereyga loo adeegsado noocyo kale oo isku mid ah. Kaliya waa inaad socod yar ku dhex martaa shabagyada si aad u aragto in sidoo kale loo adeegsado magacyo qaar ama fardaha labka ah ee dabadooda laga jaray si looga hortago inay ku dhex dhacdo yamaarug iyo duurka, iyaguna waa la tuuray. Kuwa dambe ayaa badiyaa ah shaqooyin ka shaqeeya berrinka.
Aynu u noqonno fardo yaryar. Jaca, dhab ahaan, waa erayga Isbaanishka ee loo yaqaan 'ponies'. Dambigu waa Anglicism-ka la qaatay oo la beddelay ereyga Isbaanishka markii loola jeedo xayawaankan. Maskaxda ku hay in Ingiriisigu miisaan badan ku leeyahay adduunka faraska.
Aynu wax yar si ka sii qoto dheer u aragno waxa uu yahay "Jackfruit".
1 Maxey yihiin jackfruits-ka?
2 Jack Navarra
2.1 Sida ay yihiin?
2.2 In yar oo idinka mid ah taariikh
Maxey yihiin jackfruits-ka?
Noocyada sinnaanta duurjoogta ah (fardaha, dameeraha, dameeraha ..) dhererkooduna kama badnaan hal mitir iyo badh iskutallaabta oo sida caadiga ah waxay leeyihiin dhegaha toosan, las eniestas manes oo dhogorta ay ka jeexjeexeen meelaha qaarkood. Asal ahaan waxaan ku sifeyneynaa Pon, ama halkii, saxan saxan?
Farduhu waa xayawaanada guryaha lagu dhaqo ee xayawaanadan duurjoogta ah, noocyadiisuna waxay isu beddeleen inay ka dheer yihiin mitirkaas iyo badh dhererkiisa, lakabyada dhogorta ay leeyihiin way kala duwan yihiin, maniskuna way ka qurux iyo dheecaan badan yihiin.
Jacas uu fardaha semi-duurjoogta ah ama kuwa guryaha lagu haysto ee sida weyn u ilaaliya astaamaha fardaha duurjoogta ah ee asalka ah, marka lagu daro dabeecado badan isla sababtan.
Dhab ahaan dhammaan noocyada jackfruit-ka Isbaanishku waa madow ama bunni oo leh dhago toosan.
Waxaa laga yaabaa inay xiiso laheyd in la arko tusaale Raza de Jaca, aan aragno Jaca Navarra.
Waxaa jira madaahibta badan ee taranka this ku dhashay Navarre, sida: Pony Navarro, Caballo Navarro, Caballo Vasco-Navarro, Caballito de Andia, Caballito de la Barranca ama Caballito de las Amescoas.
Sida ay yihiin?
Waxay ku saabsan tahay xoolaha rustic, xoog leh, oo ku habboon ku noolaanshaha meelaha buuraha leh. Waa a nooc cimri dheer, dabeecad adag leh iyo dherer hoose, ku dhowaad 1,26 dheddigga iyo 1,34 ragga.
Waa muuqaal isu dhigma oo nool, lehna calool horumarsan. Ku madax aad u muujiyaWaxay leedahay muuqaal toosan oo xoogaa mug leh, halkaas oo dhagaha yaryar laga taagay. Ayaa leh sanka oo aad u fiday bushimaha korena waxay leeyihiin qalooc aad u muuqda iyo, in tijaabooyinka qaarkood, la siiyay shaarib khaas ah.
Laabta muruqyada, laab qoto dheer iyo qaabka feeraha, ayaa sameeya qaabka jirku wuxuu u eg yahay foosto.
ka addimada waa khafiif yihiin laakiin xoog badan yihiin, ku dhammeeyay godad yar yar oo adag.
Sida dhogorteeda, la jaakada caadiga ah waa xabadka, gaar ahaan tan mugdiga ah. Marooyinka iyo dabadu waa dhif iyo si joogto ah.
Ujeeddadu waxay tahay inay gaarto buuxinteeda inta udhaxeysa seddex ilaa afar sano, taas oo macnaheedu yahay waxay leeyihiin horumar soo daahay.
In yar oo idinka mid ah taariikh
Asalka waxaa ka buuxa wax aan la aqoon. Haddii la ogyahay in aagga ay ku taal had iyo jeer ku noolaa ka socda dooxada Aezkoa ilaa dooxada Lana, iyo inaanay la xidhiidhin noocyo isku mid ah meelaha juqraafiyeed ee u dhow.
Kahor qarnigii XNUMXaad, Tarankaani wuxuu aad muhiim ugu ahaa Navarra, si kastaba ha noqotee, laga soo bilaabo qarnigaas iyo bilawgii XNUMX, wuxuu bilaabay inuu hoos udhaco mishiinka beeraha awgeed. Intaa waxaa sii dheer, iskutallaabyada leh noocyo kale oo kala duwan oo ka yimid gobollada u dhow ayaa halis geliyay asalka Jaca Navarra.
Maanta waxaa laga helaa magaalooyinka yaryar ee safafka buuraha Urbasa iyo Andia, iyo sidoo kale Goizueta ama Izalzu. Tan iyo markii 1982 ee beerta Sabaiza ayaa xarun abuur iyo tixraac laga sameeyay Jaca Navarra, kuwaas oo kuwii hore ay ka yimaadeen xoolo yar oo la abuuray 1939 markii tijaabooyinka Jaca ay hoos u dhacayeen.
Sabaiza, digaaga ayaa ku nool buuraha, buuraha iyo seeraha, iyagoo helaya xoogaa quudin ah ama daaqsin xilliga jiilaalka. Xayawaanada waxaa loo aruuriyaa oo keliya in la adeegsado xoogaa nadaafad ah, sidaa darteed waxay leeyihiin xorriyad aad u weyn, iyagu ma ahan xayawaan la dhaqdo
La tirada dadka hada ee Jaca Navarra ayaa ku wareegsan 350 koobiyo, oo 20 ka mid ah ay rag yihiin iyo 330 dumar ah. Tartankii ku jira Khatarta baabi'inta.
Si loo xaliyo xaaladdan waxaa lagu wadaa "qorshe soo kabasho iyo daryeel" halkaas oo koox yar oo ka mid ah soosaarayaasha noocyadu ay iskaashadaan. Tusaalooyinka qaar ee ficillada la qaaday ayaa ah: fulinta baaritaanka muunadaha, diyaarinta diiwaanka, daraasaadka hidda-socodka iyo u siinta kuwa soo-saarayaal ah oo leh daahir daahir ah oo ah nooca si ay jiilalka mustaqbalka ugu dhaqaaqaan dayactirka asalka asalka ah.
Waxaan rajaynayaa inaad ka heshay akhriska maqaalkan sidii aan u qorayba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » Aynu ka hadalno Jacas, faan iyo fardo
Asturcón, waa faras duurjoogta Yurub ugu dambeeya
Wiilasha deggan: doorarka iyo masuuliyadaha